Mba Uwa – Igbo Services
maka oge ndi igbo
ihe gbasara ndi ọrụ anyi
Publisher - ...von igbo
Asusu ndi ọzọ
Burnaboy abụrụla onyeisiojii mbụ ineta nturu-ugo anọ n’Afika
CHIDI IGWE	 May 18, 2022 0
Aga amalite imeghie ọdọ-ahia na Shanghai
A zọpụtala ọtụtụ ndịagha Yukren tọrọ n’Azovstal
Onyeisiala Sri Lankan eduola ndo Minista anọ n’iyi ọrụ
Ihe ikwesiri ima banyere Genevieve Nnaji￼
Afrika Agum Akwuwo Ahuike Azum Ahia Egwuriegwu Ihe Emereme Naijiria
Ahịrị nlekọta anụ ahụ Rihanna ga-amalite na Africa.
Chigo	 May 12, 2022 0
Ogaranya Barbados ekwuputara nso nso a, Rihanna ekwuputala na 'Fenty', lime nlekọta anụ ya ga-abịa Africa. Lee ozi oziputara n’akara twitter ya: N'ikpeazụ bụ ova!!!! 🌍 AFRICA - anyị na-ebuli elu! 🙌🏾 Onye…
Ndị gọvanọ Rọshịa anọ gbara arụkwaghịm n’ihi mmachi.
Ndị gọvanọ mpaghara anọ Rọshịa gbara arụkwaghịm na Tuzdee, ka obodo ahụ na-akwado nkwado nke mmachi akụ na ụba. Ndị isi mpaghara Tomsk, Saratov, Kirov na Mari El kwupụtara ọpụpụ ha ozugbo n'ọfịsi, ebe onye isi mpaghara Ryazan kwuru…
Gọvanọ anọ agbala arụkwaghim n’mba Russia
CHIDI IGWE	 May 11, 2022 0
Ndi regional gọvanọ anọ agbala arụkwaghim n’ụbọchi Tuuzde,dika obodo ha na enwe nsogbu ọnọdu akụlụba ma nmachi amachiri ha. Ndia si mpaghara Tomsk, Saratov, Kirov na Mari El regions kwuputara na ha n’agba arụkwaghim,ebe onye nke…
Mba Hungary nwetala nwanyi mbu dika onyeisiala ￼
Eduola, Katalin Novak,n’iyi ọrụ dika nwanyi mbụ ga-achi dika onyeisiala mba Hungary n’ụbọchi Tuuzde. Ndi Parliament họpụtara Novak dika onyeisiala mba Hungary n’abali iri nke ọnwa Machi, dika emere ntuliaka a, Novak kwuru nay a ga abụ…
Philippines amalitela ntuliaka iji họpụta onyeisiala ọhụrụ
CHIDI IGWE	 May 10, 2022 0
Mba Philistine amalitela ime ntuliaka-elu iji họpụta onyeisiala ọhụrụ taa bụ Mọnde nakwa mmadu puku iri asatọ bụ ndi ga eji ọkwa gọọmenti di icheiche. Ndi aga ahọpụta bu osote onyeisiala, Sinatọ iri na abụọ,ihe kariri mmadu…
Moses nyere goolu n’nmeri Spartak Moscow meriri
CHIDI IGWE	 May 9, 2022 0
Victor Moses nke ala Naijiria nye otu goolu ma nye aka na ọzọ mere ka otu egwu Spartak Moscow nweta nmeri,site na inye ọkpụ atọ asatara nani otu bụ ndi Ural na mpaghara Ekaterinburg Arena n’asompi Russian Premier League. Moses nke nọbụ…
Achọpụtala ndi ọhụrụ butere ọria COVID-19 na Beijing city
Beijing nọrọ n’ụbọchi ụka mee ka amata na ha chọpụtara mmadu iri atọ na itolu butere ọria COVID-19 ọhụrụ,ọbụ ndi ọrụ disease control n’isi obodo China mere ka amata nkea. Onye deputy direktọ na Beijing Municipal Health Commission bụ,…
Oliseh etoola Iwobi maka mbọ ogbara na Leicester
Onye jibu ọkwa dika head coach ndi otu egwu Super Eagles nke ala Naijiria bụ,Sunday Oliseh,etoola Alex Iwobi maka ike ọkpara mgbe ndi otu ya zutere ndi Leicester City n’ụbọchi ụka. Iwobi kpara ike ebe ọdi ukwu ihụ na ndi otu ya nwetara…
Gọomentị Briten akọwala okwu gbasara inye nchekwa
CHIDI IGWE	 May 8, 2022 0
Gọọmenti mba UK ekwuola na otu Indigenous People of Biafra abụghị otu oyi egwu nke bekee kpọrọ 'terrorist' na mba ha. Ha kwuru na akụkọ na-efegharị na gọọmenti UK etinyela otu Ipob n'akwụkwọ ebe ha depụtara ndị oyi egwu bụ akụkọ ụgha. …
Ka okwe siri gba na Premier League￼
Otu egwuriegwu Brentford ji ọkpụ atọ na asaghi asa dula ndi egwu Southampton,Aston Villa ji ọkpụ atọ asatara nani otu dula ndi Burnley,Chelsea na Wolverhampton Wanderers nyere onwe ha ọkpụ abụọ abụọ,Brighton&Hova Albion gbara ndi…
Kedu ihe bụ omenala ndị Igbo?
EJIJI NDI IGBO N’OGE A.
Onyeisiala Buhari katọrọ ọgbaghara na South-East.
© 2022 - Igbo Services. All Rights Reserved.